ရွေးကောက်ပွဲ ပါဝင်သည့် ပါတီအလိုက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးရေ
Myanmar leader says 2010 election plans on course Archived 29 April 2011 at the Wayback Machine.. Kuwait Times. November 30, 2008.
Kipgen၊ Nehginpao။ "Reconciliation Myanmar Needs"၊ Korea Times၊ 29 December 2009။
လာမည့် နိုဝင်ဘာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်။ (ဧရာဝတီ)
နအဖ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေ ထုတ်ပြန် (ခေတ်ပြိုင်)။ 20 July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 May 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ တရားမမျှတဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော (ဧရာဝတီ)
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေထုတ် (ဘီဘီစီ)
Buncombe၊ Andrew။ "Burma bans marching and chanting during rallies"၊ 23 June 2010။
Suu Kyi party splits, faction to run in Myanmar poll. Reuters.7May 2010
လွှတ်တော်အသီးသီးတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း စာရင်း (မဇ္ဈိမ)